गाँजा खाने महिलामा यौन उत्तेजना बढी हुन्छ? – Everest Dainik – News from Nepal
गाँजा खाने महिलामा यौन उत्तेजना बढी हुन्छ?
अमेरिकामा हालसालै गरिएको एक अध्ययनले एकतिहाइ महिला सेक्स गर्नुभन्दा अगाडि गाँजाको प्रयोग गर्ने देखाएको छ ।
गाँजा पिएपछि यौनसम्पर्क राख्दा बढी सन्तुष्टि महसूस भएको र यौनप्रति इच्छा अझै बढेको अध्ययनमा संलग्न महिलाहरुले बताएका थिए । त्यस्तै, यौन सम्पर्कको बेला बढी लुब्रिकेशन (तरलता)को महसूस हुनुका साथै पीडा पनि कम भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धाताका अनुसार अमेरिकामा हाल वयस्कहरुबीच गाँजा प्रयोग निकै बढेको छ । अमेरिकाका कतिपय राज्यले औषधि तथा रमाइलोका लागि गाँजा प्रयोगमा कानूनी रूपमा नै छुट दिएकाले यसको प्रयोग बढेको हो । अमेरिकाको सेन्ट लुइसस्थित एकेडेमिक सेन्टरको एब्स्टेट्रिक्स र गाइनोकोलोजी विभागमा ३७३ महिलामा यो सर्वेक्षण गरिएको हो । सर्वेक्षणमा १२७ जना अर्थात् ३४ प्रतिशत महिलाले यौन सम्पर्क सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गाँजा पिउने गरेको स्वीकार गरेका थिए ।
ट्याग्स: यौन उत्तेजना